Olu xwebhu lulandelayo luchaza imigaqo yokusetyenziswa kwewebhusayithi yeMAKE.ID. Ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na inkonzo ye-MAKE.ID, kufuneka ufunde, uqonde, kwaye uvumelane nale migaqo. Ikholamu esekunene inika inkcazo emfutshane yemigaqo yokusetyenziswa kwaye ayizibopheleli ngokusemthethweni.
(2) Le migaqo nemiqathango iya kusebenza kulo lonke ubudlelwane beshishini phakathi komthengi kunye ne-www.make.id. Bafaka isicelo kubanini bamashishini kulo lonke unxibelelwano lweshishini lwexesha elizayo, nokuba akuvunyelwanga ngokucacileyo kwakhona; Inguqulelo ngexesha lesivumelwano iyasebenza kwaye isebenza.
NGEZIKOLO, Sineemveliso ezinkulu, nangona kunjalo abanasikhundla saseburhulumenteni.
(1) IMAKE.ID ayisoze ibenoxanduva kuyo nayiphi na (ethe ngqo, engathanga ngqo, eyenzekileyo, ekhethekileyo, eqhelekileyo, elandelwayo) ilahleko okanye umonakalo obangelwe kukusetyenziswa kwala makhadi. Xa ungathandabuzeki, umthengi ukhusela wonke umonakalo kunye namatyala omntu wesithathu.
(2) Luxanduva lomthengi ukuqinisekisa ukuba ukubanakho kunye nokusetyenziswa kwezi tempile zekhadi esele zenziwe zivunyelwe kwindawo efunwayo ngaphambi kokuthenga ikhadi kunye nathi. Ngokuthengwa kwamakhadi ethu sele enziwe umthengi uyaqinisekisa ukuba ukubakho kweli khadi kuvunyelwe kwilizwe elihambelanayo, kwishishini okanye kumbutho.
(1) Iimveliso kunye neenkonzo ezidweliswe ngaphakathi kule venkile ekwi-Intanethi ayizizo izithembiso ezibophelelayo; sisimemo kumthengi ukuba angenise isithembiso esibophelelayo kwi-MAKE.ID ngokubeka iodolo.
(2) Ngokungenisa idatha yoku-odola ekupheleni kwenkqubo yoku-odola umthengi ubeka i-odolo ebophelelayo yezinto ngaphakathi kwinqwelo yokuthenga eyi-www.make.id iyakuqinisekisa ukufunyanwa komyalelo kwangoko. Esi siqinisekiso sokufunyanwa asikuko ukwamkelwa komyalelo; nangona kunjalo inokunxulunyaniswa nesibhengezo sokwamkelwa.
(3) www.make.id unelungelo lokwamkela ikhontrakthi (i-odolo) yomthengi ngaphakathi kweentsuku ezisixhenxe zomsebenzi efumene. Ukwamkelwa kunokubhengezwa ngokunxibelelana ngokucacileyo okanye ukuhanjiswa kwempahla.
(5) Isivumelwano sokugqibela sixhomekeke kunikezelo olungelulo okanye oluyinxalenye, kwimeko yokuhanjiswa okungachanekanga okanye okungafanelekanga ngabanikezeli - oko kukuthi, www.make.id ayithathi mngcipheko. Uxanduva lokuzimisela nokungakhathali ngokungqinelana ne-§ 9 yale Migaqo neMiqathango iya kuhlala ingachaphazeleki. Kwimeko yokungafumaneki okanye ekufumanekeni okungaphelelanga kweenkonzo www.make.id ziya kwazisa umthengi kwangoko; Kwimeko yokurhoxa ngumthengi, intlawulo esele yenziwe iya kubuyiselwa imali ngokukhawuleza, ukuba inkonzo ayikaqaliswa okwangoku.
(2) Umthengi uya kuba nelungelo lokuhlawula kuphela, ukuba amabango akhe aphikisayo amiselwe ngokusemthethweni okanye amkelwe ngu www.make.id. Umthengi unokwenza kuphela amalungelo akhe okugcina ukuba ibango eliphikisayo lisekwe kwisivumelwano esinye.
(1) Kubasebenzisi, i-www.make.id igcina ubunini beempahla ezithengisiweyo (iimpahla ezinemiqathango) de kwenziwe intlawulo epheleleyo yexabiso lokuthenga. Kumashishini, www.make.id inyanzelisa ukuhlawulwa ngokupheleleyo kwawo onke amabango kubudlelwane beshishini obuqhubekayo.
(4) Ukophula ikhontrakthi ngumthengi - ngakumbi ukusilela ukuhlawula okanye ukwaphula uxanduva phantsi komhlathi (2) kunye (3) neli lungiselelo - www.make.id unelungelo lokusirhoxisa isivumelwano kwaye ukubuyisa iimpahla.
(2) Ngokuhambelana nezibonelelo ezisemthethweni, umthengi unokufaka ibango kuphela lokuzaliseka okulandelayo ukuba iimpahla ezizisiweyo zinesiphene. Umthengi unokukhetha ukuba inzaliseko elandelayo iya kwenziwa ngokulungiswa okanye ukutshintshwa. Nangona kunjalo, i-www.make.id ihlala inelungelo lokwala uhlobo lokuzalisekiswa ukuba luza neendleko ezingalinganiyo ngelixa olunye uhlobo lonyango lungenazo izinto ezimbi kumthengi.
(1) Ngenxa yeemfuno zomthetho www.make.id linoxanduva ngokupheleleyo lokonzakalisa okubangelwe kukwenzakala ebomini, ilungu lomzimba okanye impilo esekwe kukwaphula umthetho ngabom okanye ngokungakhathali, abameli bayo bezomthetho okanye abancedisi bayo kunye neminye imonakalo, ngokusekwe ukwaphula ngabom okanye ngokungakhathali umsebenzi kunye nenkohliso ngabo, abameli bawo okanye abameli. Ngapha koko i-www.make.id inoxanduva ngokupheleleyo lokonakaliswa okugutyungelwe luxanduva ngokwemigaqo esemthethweni ebophelelayo, efana noMthetho weTyala leMveliso laseJamani
(2) www.make.id unoxanduva lomonakalo obangelwe kukungakhathali okulula, nanjengoko ukungakhathali kuchaphazela ukophula izibophelelo zesivumelwano, apho ukuzalisekiswa kwenjongo yesivumelwano kubaluleke kakhulu (izibophelelo ezisisiseko); Ngelixa uxanduva luthintelwe ukubonwa kwangaphambili, ngesiqhelo, ngomonakalo othe ngqo.
(3) Kwimeko apho ukwaphula ngokungakhathali kancinane kwezibophelelo zesivumelwano esincinci www.make.id akuyi kuba luxanduva kumashishini; ngokubhekisele kubathengi, uxanduva kwezi meko lunqunyelwe kulwazelelo olubonakalayo, oluqhelekileyo, noluphakathi ngqo.
Le Migaqo yeNkonzo iyasebenza ukusukela nge-Agasti 01, 2017.